त्यो फोन कल ! त्यसपछि एउटा डुंगाको कथा | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ८ चैत्र २०७८, मंगलवार २२:३१
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको मोबाइल फोनमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । ट्रु कलर आईडीमा केपी शर्मा ओली देखायो । उनलाई लाग्यो, कतै देशकै निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको फोन कल त होइन् । फेरि सोचिन् प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले मलाई किन फोन गर्नुभयो ?
त्यसपछि उनले एउटा डुंगाको कथा सुनाए । त्यसपछि उनी उहाँ ओली नै हो भन्नेमा सतप्रतिशत विश्वस्त भइन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईको पार्टी नयाँ शक्ति नेपालबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । भट्टराईले नयाँ शक्तिलाई जनता समाजवादी पार्टीसँग एकता गराएपछि उनी निष्क्रिय भइन् । उनले आफ्नो पढाइलाई र कलाकारितालाई मात्र अगाडि बढाइरहेकी थिइन् । त्यहीबेला ओलीले फोन गरे । ओलीको फोनपछि उनमा पुनः राजनीतिको मोह जाग्यो ।
पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा पछि हट्दिनँ : करिश्मा मानन्धर